Ihu ite ite, ịchọ mma Set Bot, Liquid Foundation Bottle - Jiamei
Main ngwaahịa Ngosiputa karama, ude ite, senti karama, mmanụ dị mkpa Exporting di iche iche nke ịchọ mma karama nke iko na plastic ihe, gụnyere latex karama, ude karama, mmiri mmiri na karama, karama karama, senti karama, ntu Polish karama, mkpa mmanụ karama na na na. Kalama ahụ gụnyere karama iko olu, karama iko karama na karama frosting wdg.
Factory Direct Sales, ngwaahia nhazi
Xuzhou Jiamei mbukota Products CO., LTD bụ ọkachamara emeputa na soplaya nke dị iche iche (ọkara / elu-ọkwa) ịchọ mma iko karama.
N'ogbe ntụpọ, ọkọnọ zuru ezu
Nnukwu ebe nchekwa, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwongwo ntụpọ, ngwaahịa ntụpọ n'oge.
Ọnụ ọnụ, zuru oke mgbe-ahịa
Nkwado nhazi nhazi, njikwa ego, ọrụ ndị ahịa ọkachamara, nkwukọrịta na-enweghị ihe mgbochi, mmesi obi ike, ịnabata ịkpọtụrụ na ịtụ.
N'ogbe Green Amber Glass Mkpa Oil Rolle ...
Product aha Green Amber Glass Mkpa Oil ala Bottle Ihe Glass Size 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml Customization Ee Agba Green Service silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labelụ, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ Port Lianyungang, Shanghai, Ningbo Mentkwụ Tgwọ T / T Mkpa mmanụ karama bụ isi ngwaahịa nke Xuzhou Jiamei Glass rụpụta Co., Ltd. Green amber iko cylinder mkpa mmanụ karama bụ otu n'ime them.The green mmanụ kalama ka nke amba glass.Glass karama a ...
N'ogbe Piel Glass Mkpa Oil Squar ...
Aha aha Square iko karama mmanụ dị mkpa 10ml, 25ml, 35ml, 50ml, 100ml Agba Clear Customization Ee mentkwụ Tgwọ T / T Style Sample ojiji ojiji Mkpa mmanụ karama Service silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na usoro The square nụchara anụcha karama mmanụ na-ewu ewu na ọha na eze n'ihi ọdịdị pụrụ iche ya. Ọ dị iche na cylinder ọdịnala ma nwee ọdịdị pụrụ iche. E jiri ya tụnyere ọdịdị nke cylindrical, ọdịdị nke square karama mmanụ ...
egwurugwu agba mkpa mmanụ ala karama 5m ...
egwurugwu agba dị mkpa mmanụ ala karama 5ml oké iko ala ala karama na yi aluminum mkpuchi maka mkpa mmanụ senti Zuru okè size: zuru okè maka mkpa mmanụ, senti na ndị ọzọ mmiri; Dị mfe iji jupụta, dị ọcha ma jighachi karama: karama na-egosipụta arụmọrụ dị nro na-adịghị mma nke na-arụ ọrụ na-adịghị mma nke na-eme ka ọ ghara ịdapụ ma ọ bụ ịwụpụ; Ezigbo Ngwa: Rolling metal obi ụtọ n'ihi na mfe ọbụna mmanụ ngwa, ọ dịghị ihe ọzọ rollers ịlụ rapaara ma ọ bụ na-apụ; Gaa njikere: buru mmanụ gị everywh ...
agba 5ml 10ml ihihi àmà ígwè ala bọl g ...
Ntak emi Họrọ Anyị 1.Direct factory na asọmpi price, enye ahịa aku nkwakọ ngwọta. 2.Rich ndị injinia nwere ahụmahụ, mepụta karama iko dị mma. 3.Lustomized LOGO nwere ike e biri ebi 4.Low MOQ 5. Nye ego mgbe ị nwere $ 1000 6. Nyefee ngwongwo na oge. Nkọwapụta Ngwaahịa: - Glass na-echebe megide ụzarị UV. - karama iko na-eguzogide ọgwụ, bọl bara uru na nke na-adịgide adịgide - Zuru okè maka njem, dị mfe iburu, refillable, obere na adaba. - Adabara lo ...
15ml Square Clear Efu Glass Ntu Polish Bottl ...
Aha aha 15Ml Square Clear Efu Glass Glass Polish Bottle With Cap Material Glass Color Clear, nwekwara agba ahaziri iche. Ike 15ml Moq (1) 5,000pcs mgbe nwere ngwaahịa (2) 50,000 PC mgbe mkpa uka mmepụta ma ọ bụ na-emeghe ọhụrụ ebu nzipu Oge (1) Na ngwaahịa: n'ime 3-5 ụbọchị mgbe na-anata ụgwọ. (2) Na ngwaahịa: 25 ~ 30 ụbọchị mgbe ọ natara ịkwụ ụgwọ. Port: Shanghai, Qingdao ma ọ bụ Lianyungang Mkpa Ijikwa Hot zọ, Electroplating, Silk ihuenyo obibi, Sp ...
12ml pink ahaziri iko ntu art gel Polish ...
Product aha 12ml pink ahaziri iko ntu art gel polish karama na ahịhịa Ihe Glass ikike 12ml Mkpa Technology silk ebi akwụkwọ logo / na-ekpo ọkụ zọ logo / elu sere / UV mkpuchi MOQ 10000 Oge nzipu 7-15days Sample Free, nnyefe na 3-5days na dị samples . 7-10days na hazie samples Agba White nwa, ọbara ọbara, -acha anụnụ anụnụ, odo, odo odo aja aja, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ omenala Q: Are a emeputa? Azịza: Ee, anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Anyị factory ...
High-ọkwa Lancome usoro nke nwoke skinca ...
Aha ngwaahịa Lancome usoro nke akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-ekpuchi iko karama Logo Printing Ee Style Sample Mbupu DHL, Fedex, UPS, Ibu ụgbọ, Oke osimiri OEM Dị ka arịrịọ gị The Lancome Cosmetics Collection for Men bụ otu n'ime ihe ịchọ mma ole na ole dị maka ụmụ nwoke. emeziri nke nwere iko dị elu, nke na-ekewa ihe ịchọ mma site na mpụga ụwa ma gbochie evaporation na mmetọ nke mmiri mmiri. Emebere iko iko ya ka ọ dị ntakịrị na mor ...
Okomoko ịchọ mma mbukota esetịpụrụ efu iko mma ...
Product aha Mma ihu Ngosiputa Ngwa edobe Port Shanghai, Lianyungang, Qingdao mentkwụ Tgwọ T / T Mbupu DHL, Fedex, UPS, Ikuku ibu, Oké Osimiri ibu OEM Dị ka gị arịrịọ Anyị Mma ihu ịchọ mma tent nwere a siri anya. Ha na-mere nke ezi iko na iko nwere ike e na agba dị iche iche dị ka gị requirements.Their kalama olu na mkpuchi na-kanyere na a ìhè okomoko style ụkpụrụ, na-eme ka n'ozuzu kalama anya dara oké ọnụ na siri. n ...
Obere-okomoko oval egg mmiri mmiri na ntọala essenc ...
Ngwaahịa Aha oval mmiri mmiri mmiri kachasi mkpa iko karama Ọdịdị Oval / akwa Customization Ee mentkwụ Tgwọ T / T Mbupu DHL, Fedex, UPS, Ibu ụgbọ, Oké Osimiri ibu OEM Dị ka gị arịrịọ Nka silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ Ahụ nke oval mmiri mmiri mmiri dị mkpa bụ karama karama ka emere ya n'ụdị akwa ma yie okirikiri ma mara mma. Ejiri iko ahụ mee iko, nke siri ike na gburugburu ebe obibi ...
Elu àgwà Square Piel Glass dropper L ...
Product Name Square Pipe Glass Dropper Liquid Foundation Bottles Craft silk screen, hot stamping, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ agba ， decorating firing na ndị ọzọ Filiks Ngwa zuru oke maka Liquid Foundation Mbupu DHL, Fedex, UPS, Air freight, Sea freight OEM As your request Style Sample Square transperent mmiri mmiri na-eji karama mee nke dị elu iko, na-atọkwa gburugburu ebe obibi-echebe, na na akara na mba àgwà ụkpụrụ. Ọ ...
1 / 6oz 5ml mini mpịakọta-na iko mkpa mmanụ bott ...
Elu Ijikwa Hot zọ Industrial Jiri Personal Care Base Ihe iko Isi ihe iko olu akwa Ihe iko akara Roldị Roll On Jiri Mkpa mmanụ Ebe nke Mmalite JiangSu, China Model Number BLP-5ml Brand Name JiaMei Ihe Glass agba ọ bụla na agba maka isi-esi ísì ụtọ karama iji maka ọgwụ , jupụta ude anya, mmanụ na-egbu maramara, mmanụ na-esi ísì ụtọ wdg. UV agba agba ọ bụla dị maka isi ísì ụtọ karama Ihe eji esi na-esi ísì ụtọ 35days maka f ...
10ml kristal gemstone senti karama iko esse ...
Elu Ijikwa Dechapụ ebi akwụkwọ Industrial Jiri Personal Care Base Ihe iko Isi Ihe iko olu akwa Ihe iko akara Roldị Mpịakọta On Jiri Mmanụ Mkpa Dị Mkpa Hebei, China Model Number 10ml Brand Name Jia Mei Material Glass Volume 10ml Cap type Aluminium / achara okpu Agba sodalite; tiger eye jasper; green aventurine; fluorite; jasper red Use essential oil / perfumer MOQ 100pcs Duru oge 12-24 awa mgbe ịkwụ ụgwọ gị Ihe nlele free sampl ...